Global Voices teny Malagasy » Tontolon’ny Blaogy ao Naija · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Oktobra 2018 4:52 GMT 1	 · Mpanoratra Sokari Ekine Nandika imanoela fifaliana
Weblog-n'i Chippla  – Mifidy i Liberia
”Mety efa lany andro eny amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana ny fifidianana liberiana fa tena zava-dehibe izany, tsy ho an'i Afrika Andrefana irery ihany fa manerana izao tontolo izao ihany koa. Iza moa no afaka nihevitra tamin'ny roa taona lasa izay fa hiseho izao, rehefa teo amin'ny fitondrana ny mpitarika ady sy ilay andriamborivory nanjaka tokana, Charles Taylor?”.
Naija Jams – Manombana indray ilay kintan'ny Reggae, i Ras Kimono.
”Mipetraka amin'izao fotoana izao any Etazonia, manohy ny manatanteraka ny fampisehoany an'ity reggae manokany nangalana aingam-panahy avy tamin'i naija ity i Ras Kimono  miaraka amin'ny Tarikany “Massive Dread Band”, toa tsy dia mitovy amin'ireo karazan-tsiro tsy manam-paharoa-nà Reggae Nizeriana hafa izany”.
Nigerian Times  – Misaintsaina ny tsy fahombiazan'ireo tsy dia tsara araka ny niheverana azy ho ”Super Eagles” an'i Nizeria
”Lasa olana miteraka adihevitra be manerana ireo an-tapitrisa mpankafy baolina kitra tao Nizeria sy manerana izao tontolo izao ny tsy fahombiazan'ireo Super Eagles an'i Nizeria tamin'ny fidirana ho amin'ny Lalao Famaranana ny Amboara Eran-tany tany Alemana tamin'ny 2006. Tsy nahavita ny niditra i Nizeria sy ilay ekipa Afrikana sangany tamin'ny baolina kitra toa an'i Kamerona raha toa ka tafiditra kosa ny firenena ambany laharana toa an'i Togo! Ary inona hoe? Nizeriana ny mpanazatra nasionalin'i Togo! Ny kapitenin'ny Super Eagles taloha, ilay Pata tenany, i Stephen Keshi.”
‘Big up’ be ho an'ireo tafiditra , i Togo , Ghana , Tonizia  ARY indrindra i Côte d'Ivoire  sy i Angola . Ela ny ela, mpilalao baolina kitra tena izy izay milalao ny lalao fa tsy vondrona maro an'isa, voky vola fa tsy mavitrika izay milalao amin'ny ampahany ambony amin'ny tompondakan'i eoropa. Super Eagles – Mba vondrona mampalahelo ianareo ka!
Trae Days – Sary an-tambajotran'i Nizeria eo amin'ny 45
Leo an'ireo Nizeriana mipetraka any am-pitandranomasina mitaraina momba ny Fireneny i Trae
”Fa ny tena mahatezitra dia ilay rehefa izaho mahita Nizeriana notaizaina teto fa ankehitriny monina any am-pitandranomasina ary miresaka zavatra maloto momba an'i Naija toy ny hoe tsy teto mihitsy izy ireo na hoe i Naija no toerana ratsy indrindra tsy faleha. Tena manirikiry ahy mihitsy izany”.
Dusky Thoughts – Miverina aho!
Tafaverina avy amin'ny toby fanazarana tany Nizeria i DT – NYSC, tsy ho an'ireo mora tohina.
”Manomboka amin'ny 4:30 hatramin'ny 7:30, fanazarana sy fanazarana. Avy eo navela hisakafo izahay mba hanohy indray manomboka amin'ny 9:00 – 12: 30. Nanana fiaraha-midinika izahay rehefa tolakandro ary avy eo mbola fanazarana bebe kokoa amin'ny takariva. Ny hany fotoana kely nahafahanay niresaka dia ilay ora farany mialohan'ny fanapihana jiro, tamin'ny 10:00 alina”.
”Tsy letyyy e! Tena noentin'izy ireo toy ny andevo izahay. Izay mety tsy naninona tamiko ihany, afa-tsy ilay tsy fahampiana toerana fidiovana. Aza manontany ahy akory momba ny fomba nikaratahako. Tena nila tetika maizimaizina ary drafitra lalindalina izany. Ntsss, nila nioko sy nandamina ny rehetra ianao. Hany ka tamin'ny fotoana iray, nila nanao teti-dratsy sy nandamina drafitra mba hanafenana ny tenako tamin'ireo miaramila aho. Tratra aho, fa nilaina ny nanao izany fanandramana izany. Nalefa tany amin'ny birao fitazonana mihitsy aza aho (ho sazy) ary nipetraka tao nandritra ny ora enina be izao koa! Tena fiovana tongasoa izany satria tsy mbola nandika lalàna izany mihitsy aho teo amin'ny fiainako talohan'izay”.
Tenifototra: Nigeria  Blogs  Naija  Blogging 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/17/126703/
 Weblog-n'i Chippla: http://chippla.blogspot.com/2005/10/liberia-votes.html
 Ras Kimono: https://www.naija.ng/1174449-life-times-nigerian-reggae-legend-ras-kimono.html#1174449
 Nigerian Times: http://nigeriantimes.blogspot.com
 i Côte d'Ivoire: http://www.africafocus.org/country/cotedivoire.php